Yintoni ekhethekileyo ngo-Soulsex kwaye uyayifeza njani?
I-Soulsex isebenza njani?
Ubundlobongela abuzange bube khona ixesha elide, kwaye ukuba luyenzayo, ngoko ke uyamnxusa, uyaziqhelanisa kwaye uyabuhlungu. Ukumangalela emva komsebenzi akuthandanga nantoni nayiphi na iqabane, kungekudala ungakhululeki.
Ngokuxhomekeka, nangona kunjalo, zombini amaqabane afana: bafuna kakhulu ukunyamekela, ukuxhalabisa ngokomzwelo nangokomzwelo, ngokuqinisekileyo, nokuba nesondo. Akubonanga nje kunye neqabane, kubonakala sengathi le nto ihambele kude.
I-Soulsex ingaba yindlela yokuvuselela umnqweno womntu ofanayo xa uthando lusekhona.
Njengokufutshane nomlingane onjalo no-Soulsex
Umkhwa kunye nokuzonwabisa okungenangqondo
Ekuqaleni kobudlelwane okanye umcimbi, ukuxhatshazwa kubonakala kuhlala kukho. Sizinikela kumlingane kwaye akukho nto enokuyenza ukuze asiye kumfumana ekhangayo.
Ngokomzekelo, izigulane ezinomgangatho ongeke zisakwazi ukusebenzisa ubuchopho babo - mhlawumbi banethuba elincinane lokujonga ubomi babo ngokwesondo -nokuziphatha okufanayo. Abanakekeli emakhaya asebekhulile babika ukuba abaninzi balaba bahlali bayasebenza ngokuzibandakanya ngokwesondo, nangona kunjalo.
Umnqweno wesondo ukhona, kwintsebenziswano ebuthile. Kodwa ukuba umkhwa uya kudlala, ingqondo iyatshintsha ngexesha elithile - kwaye yenza okungakumbi kunokuba okokuqala kwakufuna ukugxeka. Ubusiso obungokwesiko obungenakuvakalelwa, kodwa kukucingisisa okwenza zonke ezinye izilwanyana.
Wonke umntu ukhumbula amava olwabelana ngesondo, awakungekho nje ngomzimba, kodwa uxhaphazo lwamazwi kumlingane. Ngokukodwa kwiinkalo ezandul 'ukuqala apho uthando lulungile kwaye apho kungekho masiko, le nxalenye yoqhagamshelwano lwezesondo iyaqhubeka. Yiloo nto umlobi uEva-Maria Zurhorst ofuna ukuphinda avuselele kwincwadi yakhe ethi "U-Soul Sex - Ukufunyanwa Ngothando Lwenyama".
Kungenxa yintoni na oko kusenza sibe luhle kulolu hlobo lwesini? Yindlela yonke into echaphazelekayo, kwaye nendlela esinokuyichaza ngayo into esingayithandiyo. Amaqabane amasha ayazana kunye kwaye kufuneka ukuba babelane ngezinto abathandayo noko bangenayo. Yinto yokuzama iqabane ngalinye ukufumanisa omnye kulo mbandela, ukufumanisa oko akuthandayo kwaye luhlobo luni lokuthintela luya kuyenza kakuhle kwaye nini.
Kwimeko yobudlelwane obude, kufuneka sihlale siqaphela apho iqabane lifuna ukuchukumiseka, uthando luhlala luhambo oluqhelekileyo lokufumanisa. Isiqhelo asikho, kunye nomntu owaziyo-okwenza i-Soulsex ibe yinto ekhangayo, ukufunyanwa rhoqo kweemfuno neemfuno zangoku zeqabane kunye nokusondela, okuza kuvela kunye nokutyhila kwabo.
Umbhangqwana oselula - ukunyamezela
U-Soulsex uqala ngawo wonke umntu.
Ukuba kunjalo, ziya kugcinwa. Kodwa ukuba bahlala beyeka ukuxhatshazwa kunye nomgama, kulungile ukuthetha loo mlingane. Akayikusola, kodwa inyaniso kukuba ibanga kufuneka lihluke. Olukhulu. EyoQobo.
Mhlawumbi uzishiya yodwa, ukuba akunandaba. Olu bulumko ludinga ukuphuhliswa ngabantu abaninzi kunye nabantu, kodwa banokukwenza kunye. Kubalulekile ukuxelela iqabane kunye nokubonisa oko ufuna - kwaye kubalulekile ukubandakanyeka.
Ayithethi iingubo zasendle okanye iingxube ezingathandekiyo, makungabikho "izinto ezintsha" zokucoca ubomi bobulili. Imayelana neminqweno yesondo. Elinye iqabane lithetha nawe. Omnye umlingani uqala uhambo lokufumanisa ukuzaliseka kwazo - kunye nangona kunjalo.
Umbala wemibala okhulayo-wesifazane oxhomekeke eludongeni
Incwadi yebala ye-Erotic ebonakalayo ebhodini